छाउगोठमा सर्पले डसेर मृत्यु, १२ बर्षमा १३ किशोरीको ज्यान गयो ! – ToplineKhabar
अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका ४ जया गाउँकी १८ वर्षीया किशोरी पार्वती बुढाको महिनावारी बार्न छाउगोठमा सुतेको अवस्थामा सर्पले डसेर शनिवार राती मृत्यु भएको छ ।
छानामा सुतेका बेला सर्पले टोकेको भन्ने मात्र खबर आफू कहाँ आएको बुढाले बताए। तुर्माखाँद गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अमृता बुढाले आफू काठमाडौं रहेको र यो घटनाबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताइन्।,यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
← गुप्तचरको सेटै परिवर्तन !
बराबरी हैसियतको एक भेटः ट्रम्प र किमको पहिलो भेटमा यस्तो देखियो →
एसइई परीक्षा कठिन बन्दै
January 11, 2018 प्रदीप भट्ट 0
July 8, 2018 प्रदीप भट्ट 0